Hawlgallo dad lagu soo qabqabtay oo ka dhacay magaalada Boosaaso – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeArimaha BulshadaHawlgallo dad lagu soo qabqabtay oo ka dhacay magaalada Boosaaso
Hiiraan Xog, Ciidamada ammaanka ayaa hawlgallo dad lagu soo qabqabtay xalay ka sameeyey qaybo kamid ah magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari.
Booliska iyo ciidanka PSF-ta oo iskaashanaya ayaa baaritaan guri guri ah ka sameeyey xaafado ay kamid yihiin Biyo Kulule, Ridwaan, Raf iyo Raxo; iyo Xaafatul Carab.
Ku dhowaad 20 qof oo dhallinyaro u badan ayaa hawlgallada xalay dhacay lagu soo qabtay, dadkaas oo xilligan baaris lagu wado kuna xiran salddhigga booliska ee Bartamaha.
Hawlgalladan ayaa yimid kaddib markii shalay suuqa weyn ee magaalada Boosaaso dhexdiisa lagu dilay sarkaal ka tirsanaa Laanta Cashuuraha ee Dowladda Hoose.
Labo nin oo bistoolado ku hubaysnaa ayaa toogtay dabadeedna baxsaday sarkaalkaas xilli uu shaqadiisa maalinlaha ah ee cashuur qaadista ku guda jiray.
Ammaanka magaalada Boosaaso ayaa muddooyinkii u dambeeyey ahaa mid soo xumaanaya, waxaana afartii toddobaad ee u dambeeyey magaalada lagu dilay ku dhowaad toban qof.
Bishii hore ee September 24keedii ayey ahayd markii askari ka tirsan ciidamada Madaxtooyada Puntland lagu dilay mid kalena lagu dhaawacay bannaanka Xarunta Dowladda Hoose ee Boosaaso, xilligaas oo Madaxweyne Gaas isla xaruntaas ku sugnaa kormeerna ku samaynayey.